Wasiiru dowlaha wasaarada ganacsiga oo xilkasi iska casilay si uu ugu tartamo xilka afhayeenka golaha shacabka – Kalfadhi
April 23, 2018 April 23, 2018 Kalfadhi
Xildhibaan Cabdicasiis Xasan Maxamed oo sido kale ahaa wasiiru dowlaha wasaarada arrimaha ganacsiga iyo warshadaha ayaa maanta ku dhawaaqay in uu iska casilay xubinimadii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya si uu ugu tartamo xilka guddoomiyenimo ee golaha shacabka.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu xildhibaankan ku xaqiijiyay in uu u taagan yahay xilka afhayeenka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya.
” Waxaan doonaya in aan halkan ka xaqiijiyo in aan aqballay shuruudaha guddiga doorashada golaha shacabka sidaas awgeed waxaan si rasmi ah iskaga casillay xilka wasiiru dowlaha arrimaha ganacsiga iyo warshaddaha.”
Waa masuulkii ugu horeeyay ee ka tirsanaa golaha wasiirada ee isku casila u tartamida xilka afhayeenka golaha shacabka si uu u buuxiyo shuruudaha laga doonayo xildhibaannada ka tirsan golaha wasiirada oo waajib looga dhiggay in ay marka hore xilka wasiirnimo iska casilan.
Guddiga qaban qaabada doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa maanta billaabaya diiwangelinta musharrixiinta doonaysa in ay noqdan afhayeenka cusub ee golaha.
Doorashada afhayeenka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa dhaci doonta 30-ka bishan Abriil,sida uu guddiga qaban qaabada doorashada xaqiijiyay.